म्याग्दी समाचार | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
विकल्प न्युज/ बेनी मंसिर ११ गते । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं. २ भगवतीमा नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दल गठन भएको छ । नेपाल तरुण दल वडा ईकाइ समिति पुनर्गठन, संगठन विस्तार र सृदृढीकरण अभियान अन्तरगत शनिबार भगवति कोत मन्दिरमा भएको कार्यक्रममा अर्जुन भण्डारीको अध्यक्षमा ८१ सदस्यी तरुण दल वडा इकाइ समिति गठन भएको […]
विकल्प न्युज/ जलजला मिलनचोक, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्र जलजला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दिपक आचार्य चयन हुनुभएको छ । मिलनचोकमा शनिबार सम्पन्न प्रथम पालिका अधिबेशनबाट आचार्यको अध्यक्षतामा ५५ सदस्यीय कमिटी गठन भएको हो । उपाध्यक्षमा दुर्गाबहादुर दर्जी, गौबहादुर पुन र सीता मल्ल चयन हुनुभएको छ । सचीबमा सोम जिसि, सह सचिब रबिन जिसि र कोषाध्यक्ष […]
विकल्प न्युज/ बेनी म्याग्दी ११ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) रघुगंगा गाउँपालिका कमिटीको अध्यक्षमा हरि भण्डारी सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । शनिवार गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा सम्पन्न प्रथम गाउँपालिका समितिको अधिवेशनबाट भण्डारीको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत रुपमा ५५ सदस्यीय कमिटी निर्वाचित भएका हुन् । कमिटीको उपाध्यक्षमा टेककुमारी खत्री, इन्द्रबहादुर मगर, सुनिल सुनार, सचिबमा भविन्द्र शेरपुञ्जा,सह–सचिबमा कर्ण राना निर्वाचित […]
विकल्प न्युज/ बेनी बेनी, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्र बेनी नगर कमिटीको अध्यक्षमा सेरबहादुर केसी निर्बिरोध निर्बाचित हुनुभएको छ । बेनीमा शनिबार सम्पन्न प्रथम नगर अधिबेशनले केसीको अध्यक्षतामा ७५ सदस्यीय नगर कमिटी चयन भएको हो । कमिटीको उपाध्यक्षमा अणबहादुर खड्का (भगवान), खिमबहादुर पुन, अम्बिका ढुङ्गाना, सचिबमा ज्ञानेन्द्र सुबेदी, कोषाध्यक्षमा पदम किसान र सहसचिबमा किसान […]
विकल्प न्युज/ बेनी बाबियाचौर, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्र मंगला गाउँपालिका कमिटी, म्याग्दीको अध्यक्षमा यामबहादुर रोका चयन हुनुभएको छ । बाबियाचौरमा शनिबार सम्पन्न प्रथम अधिबेशनबाट बरंजाका रोकाको अध्यक्षतामा ५५ सदस्यीय पालिका कमिटी गठन गरेको हो । बि.स. २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट वडा नम्बर ३ को अध्यक्षका उमेद्बार बनेका रोका शिक्षण पेशा […]
विकल्प न्युज/ बेनी दरबाङ, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्र मालिका गाउँपालिका कमिटीको अध्यक्षमा युवा नेता दोरण शेरचन चयन हुनुभएको छ । पालिकाको केन्द्र दरबाङमा शनिबार सम्पन्न प्रथम अधिबेशनले गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य समेत रहेका शेरचनको अध्यक्षतामा ५५ सदस्यीय कमिटी निर्बाचित गरेको हो । कमिटीको उपाध्यक्षमा दुर्गा फगामी, गौरी सेञ्चुरी, बुद्धीबहादुर जुग्जाली, सचिबमा धनकुमार पाईजा, सहसचिबमा […]
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर ११ गते । राष्ट्रिय सम्मेलनपूर्व तल्ला तह कमिटिका अधिवेशन गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) आज शनिबार एकसाथ स्थानीय तहको अधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्दैछ् । अधिवेशनको प्रचारदेखि व्यवस्थापकीय तयारीका काम पूरा भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्बाचन समितिका म्याग्दी जिल्ला संयोजक चन्द्रबहादुर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । “सके सर्वसम्मत नत्र निर्वाचनमार्फत पालिकाको नेतृत्व चुनिन्छ,” उहाँले […]
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर ८ गते । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले संसदवादी दलहरुले आफ्नो पार्टीलाई आधा दर्जन मन्त्रालय सहित करोडौं रकम दिने प्रस्ताव गरेको बताउनुभएको छ । उक्त प्रस्तावलाई आफूले अस्विकार गरिदिएको उहाँले बताउनुभयो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आफू लडेकाले पद र पैसा अस्विकार गरिदिएको उहाँको भनाई थियो । आन्दोलनलाई विघटन गर्न संसदवादी […]
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर ८ गते । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको भातृ संगठन मगरमुक्ति मोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन बेनीमा सुरु भएको छ । बेनीको खुल्ला मञ्चमा सम्मेलनको उद्घाटन नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव)ले गर्ने जनाइएको छ । सम्मेलनमा देशभरबाट करिब ४ सय प्रतिनिधिहरु सहभागि भएका मगर मुक्ति मोर्चाका संयोजक गमबहादुर श्रीसमगरले बताउनुभयो । सम्मेलनका अवसर बेनीमा […]
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर ८ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द (विप्लव) ले आज बेनीको खुल्ला मञ्चमा सम्बोधन गर्नुह्ुने भएको छ । मगर मुक्ति मोर्चा नेपालको चौथोँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि विप्लव म्याग्दी आउन भएको हो । विप्लव मंगलबार साँझ बेनी आइसक्नुभएको नेकपाले जनाएको छ । विप्लवले मध्यान्न १२ बजे खुल्ला मञ्चमा […]
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर ७ गते । नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानामा थमबहादुर बिकको अध्यक्षतामा वडा कमिटी गठन भएको छ । दानामा सोमबार भएको प्रथम वडा अधिबेशनले गठन गरेको २९ सदस्यीय कमिटीको उपाध्यक्षमा माया बिक, सचिबमा संगिता सार्की बिक, कोषाध्यक्षमा सुकबहादुर बिक र सहसचिबमा बिनोद सेञ्चुरी रहनुभएको छ । यसैगरी बुद्धीसुवा बिकको अध्यक्षतामा गबिता बिक […]
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर ७ गते । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका– ७ विममा सोमबार होमबहादुर जुग्जालीको अध्यक्षतामा नेकपा माओवादी केन्द्रको वडा कमिटी गठन भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रेशम जुग्जालीको उपस्थितमा भएको प्रथम वडा अधिबेशनबाट २९ सदस्यीय कमिटी भएको हो । कमिटीको उपाध्यक्षमा सरु श्रीपाली, सचिवमा टंकलाल शर्मा, सह–सचिवमा देबराज जुग्जली र कोषाध्यक्षमा याम […]
विकल्प न्यूज/बेनी मंसिर ७ गते । मानवअधिकार तथा शान्ति समाज म्याग्दी शाखाको सन्तोष गौतमको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । सोमबार बेनीमा सम्पन्न १९औं वार्षिक साधारणसभा तथा ११औं जिल्ला अधिवेशनले शाखाको उपसभापतिमा हरिप्रसाद पौडेल, सचिबमा मुकुन्दप्रसाद आचार्य, कोषाध्यक्षमा बिष्णुप्रसाद आचार्य र सहसचिबमा बिष्णु गौतम सापकोटालाई चयन गरेको छ । सदस्यहरुमा नवराज रिजाल, सकुन्तला सापकोटा […]
विकल्प न्यूज/काठमाण्डौं मंसिर ६ गते । निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि स्थानीय तहको केन्द्रबाट पनि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गर्ने भएको छ । हाल ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ४० इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन भइरहेकामा अब स्थानीय तहको केन्द्रबाट पनि मतदाता नामावली संकलन गरिने प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार […]
जेसिज कपकाे १९ ओैं संस्करण मंसिर २१ देखी
विकल्प न्युज / बेनी मंसिर ६ गते । म्याग्दी जेसिजको आयोजनामा आगामी मंसिर २१ देखि २५ गते सम्म बेनीको खुल्ला मञ्चमा १९ औँ अन्तर मा.वि. जेसिजकप फुटवल प्रतियोगीता संचालन हुने भएको छ । सोमबार जेसिज सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि प्रतियोगीताको बारेमा जानकारी गराईएको हो । ‘खेलाडिको प्रतिभा प्रस्फुटनमा हाम्रो पहल–जेसिजकप फुटवल’ भन्ने मूल नाराका […]